Guddiga doorashooyinka oo ku baaqay in si deg deg ah loo soo xulo Ergooyinka doorashada Golaha Shacabka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Guddiga doorashooyinka oo ku baaqay in si deg deg ah loo soo xulo Ergooyinka doorashada Golaha Shacabka
Afhayeenka Gudiga Doorashooyinka Heer Federaal Axmed Safiina ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka Heer dowlad Goboleed ay u soo gudbiyeen liiska Shan kursi oo doorashadooda ay ku qabanayaan Magaalooyinka Dhuusamareeb & Gaalkacyo ee Maamulka Galmudug.
Afhayeenka oo Shir jaraa’id Warbaahinta ugu qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay inay u diyaar garooban Beelaha leh iyo Dhaqankooda soo Xulista Ergooyinka Kuraasta Golaha Shacabka.
Waxaa uu uga mahad celiyay Maamulka Galmudug oo noqonaya Maamulkii ugu horreeyay ee qabanaya doorashada Golaha Shacabka, usaga oo rajo ka muujiyay in dhawaan la qabto doorashada Shanta kursi ee Golaha Shacabka.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in Galmudug lagu qabto doorashada Shanta Kursi ee Golaha Shacbaka, waxaana tallaabadaasi ay ka dambeysay kadib safar uu Ra’iisul Wasaare Rooble uu ku tagay Magaalada Dhuusamareeb.
Guddiga doorashooyinka oo ku baaqay in si deg deg ah loo soo xulo Ergooyinka doorashada Golaha Shacabka was last modified: November 18th, 2021 by warsan radio
DFS oo Warbixin ka dhageysatay Taliyaha Ciidamada Midowga Yurub ee la dagaalanka Burcad Baddeeda